November 2009 - शखदा साहित्य
सिर्जनशील सशक्त नारी हस्ताक्षर शर्मिला खड्का (दाहाल)
10:07 AM समालोचना
वाणी प्रकाशनमा सुनेको थिएँ- इटहरीको बालग्राममा पढाउने एकजना शिक्षिका हुनुहुन्छ साहित्य, बाल-साहित्यमा रुचि राख्ने । उहाँले वाणी प्रकाशनको सदस्यताका लागि रकम बुझाउनु भएको कुरा पनि सुनेको थिएँ । परन्तु त्यो रकम हामीकहाँ प्राप्त भएन, न त सम्बन्धित शिक्षिका नै आउनुभयो । समय आफ्नै किसिमले बगिरह्यो ।
एकदिन शर्मिला आफ्नो 'सानी' को पाण्डुलिपि लिएर वाणीमा आइपुग्नुभयो- के कस्तो छ भनी प्रतिक्रिया लिन र परिचय गर्न । उहाँको पाण्डुलिपि हामी बूढाबूढी (कल्पना प्रधान र म) ले राम्ररी पढ्यौँ । धेरै बेर छलफल गरेर हामी एउटै निष्कर्षा पुग्यौँ- यो बाल-उपन्यास अति राम्रो छ । आधुनिक प्रविधि र शैलीमा लेखिएको यस्तो उपन्यास नेपाली बाल साहित्यभण्डारमा अति आवश्यक छ ।
फेरि हामीले सल्लाह दियौँ- यो उपन्यास तुरुन्त छाप्नुहोस् । उनले स्वीकारिन् । आफ्नै खर्चमा छापिन् र बधाई छ उनको पहिलो सन्तानले साझा बालसाहित्य पुरस्कार पायो । उनको लेखनका निमित्त यो ब्रेक भयो । 'गरिमा'मा प्रकाशित उनको रचनागर्भमा उहाँले सानीको विस्तृत दिनुभएकै छ । अनि थाहा भयो- उनका आधा दर्जन भन्दा बढी बालउपन्यासहरू रहेछन् । ती सबै उम्दा र आधुनिक रहेछन् तर दराजमाथन्किएर बसेका रहेछन् । अझ थाहा भयो- उनी प्रौढ कथाहरू पनि लेख्दि रहिछन र ती पनि नराम्रो भन्न नमिल्ने रहेछन् । अझ जानकारी भयो - उनी सानीको सिरिज लेख्दै रहिछिन् । मैले स्वीकारेँ - हेरी पोर्टरको प्रभाव । तर उनले केही दिनमा नै अर्को पाण्डुलिपि ल्याइन्- सानी भाग दुइ अर्थात् 'सानीको साहस' । मैले विश्वास गरेँ - नेपाली साहित्यको जङ्गलमा कहीँकतै सुन्दर प्रतिभायुक्त फूल फुलेको रहेछ । अनि सोचेँ- यस्ता फूलहरू जङ्गलमा नै ओइलाउन नदिऔँ, त्यसमा मलजल हालौँ । ती फूलहरू कुनै व्यक्ति वा समुदायका नभई राष्ट्रका हुन् र राष्ट्र हामी सबैको हो ।
शर्मिला खड्का (दाहाल)को बाल-साहित्यलेखनको फरक अध्ययन हुनसक्छ । तर म अहिले उनको पहिलो कथा-सङ्ग्रह 'समयको क्यानभासमा' पढेर, सोचेर आफ्नो मन्तव्य लेख्न बसेको छु । पहिले स्पष्ट पार्न चाहन्छु- यो समालोचकीय टिप्पणी होइन । खालि परिचय, पृष्ठभूमि वा अर्न्तर्कथा हो ।
म लिङ्गभेद, विशेषतः साहित्य सृजनामा गर्न चाहन्नँ । तर पनि नेपाली महिला कथालेखनबारे केही प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । यसको प्रारम्भ पनि 'शारदा' -१९९२ वि.स.) बाट नै भएको छ र तुषारमल्लिकाको कथा 'स्त्रीरत्न' ले प्रथम नेपाली महिलाको कथाको रेकर्ड राखेको छ । शारदामा महिलाहरू एक समूह नै आए जसले नेपाली कथालाई सशक्त रूपमा प्रारम्भ गरे । मोतीलक्ष्मी उपासिका एम.लक्ष्मी, वियोगिनी, श्रीमती सुशीला कोइराला, श्रीमती एम.पी.पी. शर्मा, सिस्टर इन्दिरा र बुना बरालहरूले प्रारम्भ गरेको महिला कथालेखनलाई २००० को दशकमा आफ्ना केही कथाहरू लिएर लोकप्रियादेवी जोशी उदाइन् । अर्की नारी कथाहस्ताक्षर श्री विद्यादेवी दीक्षित पनि यस समयमा आफ्ना केही पारिवारिक कथाहरू लिएर देखा परिन् जसको कथासङ्ग्रह भने धेरैपछि अर्थात् २०२० को दशकमा मात्र प्रकाशित भयो ।
श्री देवकुमारी थापा यही दशकमा बालमनोविज्ञानमा आधारित सशक्त, साहित्यिक मूल्यका कथा लिएर अगाडि आइन् । उनका हालसम्म पा“च कथासङ्ग्रहहरू प्रकाशित भइसकेका छन् । भारतीय प्रवासी क्षेत्रमा लेख्खीदेवी सेवा, राधिका राया, अमृता क्षेत्री र नीलम प्रधानहरू पनि यही समयमा देखा परे ।
श्री प्रेमा शाहको उपस्थिति नेपाली कथासाहित्यमा भिन्न रूपमा भयो । मनोवैज्ञानिकताभित्र यौनजन्य भावनालाई प्रेमा शाहले अगाडि बढाइन्, जसका दुइ कथासङ्ग्रह २०२० को दशकमा आएर प्रकाशित भएका छन् । नारीअधिकार र चेतनालाई विषयवस्तु बनाई 'स्वास्नीमान्छे' की सम्पादिका शशीकलाको कथासङ्ग्रह उसको सुरुवाल २०१९ मा प्रकाशित भए पनि, कोसेढुङ्गाको रूपमा नारी जागरणलाई प्रस्तुत गरेकी छिन् । अर्की प्रगतिवादी मोड वा धारामा पारिजातले आफ्नो वर्चस्व कायम गरिन् । उनका प्रकाशित चार कथासङ्ग्रहले मानवीय संवेदना, नारीप्रेमका साथै नारीचेतनालाई सबल रूपमा प्रस्तुत गरेर आफ्नो प्रतिष्ठा कायम गरेकी छिन् ।
२०२० को दशक नारी कथालेखिकाहरूको उपलब्धिपूर्ण दशक रह्यो । नारीकथाकारहरूको यौटा सशक्त समूह नेपाली कथासाहित्यमा सबल रूपमा प्रवेश भयो । जसमा अङ्गुरबाबा जोशी, माया ठकुरी, भुवन ढुङ्गाना, बेञ्जु शर्मा, मञ्जु काँचुली, भागीरथी श्रेष्ठ, अनिता तुलाधर र पद्मावती सिंहहरू मुख्य छन् । यसमा अङ्गुरबाबा जोशीबाहेक अन्य लेखिकाहरू अहिले पनि कथालेखन र चिन्तनमा सक्रिय छन् ।
शारदा शर्मा र सीता पाण्डेको उपस्थिति २०३० को दशकमा महत्त्वपूर्ण रूपमा उपस्थित भयो । सीता पाण्डेको कथाले यौनलाई अझ बोल्ड रुपमा प्रस्तुत गरी आएको छ भने शारदा शर्माको अन्तरमनोविज्ञान उल्लेखनीय रहेको छ । २०४० को दशकको प्रारम्भ र २०४७ को महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनपछि नारी कथाकारहरूको एक प्रतिभासम्पन्न टोली नै नेपाली कथासाहित्यमा आयो । कमसेकम नामको सूची यस्तो छ- किरण शाक्य, चन्द्रकला नेवार, राधिका राया, आइ सिंह, कमला खन्तावली, शान्ता श्रेष्ठ, भद्राकुमारी घले, रेवती राजभण्डारी, मीरा प्रधान रेम, कल्पना प्रधान, लीला श्रेष्ठ, कमला सरूप, हिरण्यकुमारी पाठक, वेदकुमारी न्यौपाने, सम्पूर्ण र्राई, पुष्पलता आचार्य, कमला र्राई, साधना प्रतीक्षा, सुधा बस्नेत, बाबा बस्नेत, सङ्गीता स्वेच्छा, कमला पराजुली, ललिता दोषी आदि । यस लामो सूचीमा गीता केशरी र दार्जिलिङको विन्द्या सुब्बाको आख्यानीय योगदान पनि सम्झनयोग्य छ । नामको यो सूची अझै लामो छ- सानुमती र्राई, किशु सिलवाल, सुधा त्रिपाठी, इन्दिरा प्रर्साई“, विन्दिया प्रधान, सुलोचना मानन्धर, लक्ष्मी उप्रेती, निर्मला पोखरेल, देवी शर्मा, बबिता बस्नेत आदि इत्यादि । नारी कथाकारको यो सूची लगभग ५० जनाको छ । धेरैको कथासङ्ग्रह पनि प्रकाशित छन् भने कतिपयको फाटफुट कथाहरू प्रकाशित भइआएका छन् ।
एक दशकदेखि बालकथा र स्तरीय प्रौढकथामा आफ्नो सृजनशीलतामा सक्रिय सबल र सक्षम श्री शर्मिला खड्काको पहिलो कथा 'समष्टि' (२०५५)मा प्रकाशित भएको थियो र त्यसपछि उनका कथाहरू बरोबर राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय पत्र-पत्रिकामा प्रकाशित भइआएका छन् । लगभग एक दशकको कथा-लेखनयात्रामा समर्पित शर्मिलाको मूल्याङ्कन, समीक्षा लेख्नु न हतार हुन्छ न अहिल्यै शर्मिलाले धेरै उत्कृष्ठ कथाहरू लेखेर धेरै माथि पुगिन् भनेर फुर्क्याउन वा प्रशंसा गर्ने पनि आवश्यकता छैन र म यसको विरोधी पनि छु । त्यस्तै प्रति पेज रु.१००० लिएर ७०/८० पेजको पुस्तकभन्दा ठूलो भूमिका लेखिदिने समीक्षक डाक्टर पनि म होइन । तर पनि नयाँ प्रतिभा वा नयाँ बिरुवालाई घामपानी दिने, गरेको कामलाई प्रोत्साहित गर्ने, सृजनशीलताको कदर गर्ने, साहित्यप्रतिको र्समर्पणलाई हामी सबै स्रष्टाहरूको कर्तव्य हो भन्ने म ठान्छु ।
शर्मिलाका २५ कथाहरू यसमा सङ्गृहीत छन् । यी कथाहरू पढेर आफ्ना केही राय वा विचार समष्टिरूपमा राख्छु ।
क) शर्मिलाका सबै कथाहरू समसामयिक आधुनिक चेतनाको प्रतिनिधित्व गर्छन् । अर्थात् यिनले नेपाली कथाको मूलधारलाई छाडेका छैनन् । आज सक्रिय, सिर्जनशील र नाम कमाएका कथाकारहरूको लाइन वा रेखामा सबै कथाहरूलाई लिएर शर्मिला खड्का उभिएकी छिन् ।
ख) शर्मिलाका कथाहरूमा नारी-संवेदना, नारी-पीडा, वेदना, चिन्ता र शोषणहरूको राम्रो तस्बिर पढ्न पाइन्छ । तर, नारी हुनुको कारणले मात्र ती लेखिएका होइनन्, सामाजिक यथार्थका प्रतिबिम्बहरू हुन् । तिनले सबै क्षेत्र, वर्ग, स्तरका नारीहरूको मनोभाव, बाँच्नुको पीडा र विसङ्गतिको घाउलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
ग) नारीवादी लेखन उनको पनि उद्देश्य हुन सक्छ तर नारी र पुरुष प्रकृतिका सुन्दर उपहार वा फूलहरू हुन्, तिनका बीचमा एक आपसमा शोषण हुनु हुँदैन, ती एक अर्काका परिपूरक अथवा सहयोगी भएर कर्मक्षेत्रमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने शर्मिलाको दृढ-विचार छ । नारीवादी लेखनका नाममा आएका उग्र क्रान्तिकारिता, विरोध र ज्वालाले नारी-पुरुषको प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक र अन्य सबै सृष्टिकालीन सम्बन्धलाई समाप्त पार्छ भन्ने सोचाइ देखिन्छ ।
घ) शर्मिलाका कथाहरूमा विषयवस्तु, घटना र चरित्रको विविधता पाइन्छ । अर्थात् नेपालका पहाडी र तर्राई जिल्ला मात्र होइन, विश्वका उन्नत मुलुकहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापानजस्ता विकसित देशमा पुगेका नेपाली चरित्रहरू पनि उनका कथाभित्र समेटिएका छन् । यसबाट उनका कथाको क्यानभास विश्वव्यापी ९न्यिदब० िर चिन्तन पनि साइबरमुखी छ भन्ने देखिन्छ । अनि द्वन्द्व र लडाइँका विश्वव्यापी चिन्ताको विषय पनि उहाँका कथाले छाडेका छैनन् ।
ङ) शर्मिलाको उमेर, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, काम गर्ने स्कुल, साथीभाइ, परिवार र वातावरणले कथामा धेरै प्रभाव पारेको छ । यो नितान्त स्वाभाविक पनि हो । उहा“का समकक्षी धेरै साथीहरू यही परिस्थिति र वातावरणभित्र बाँचिरहेका अर्थात् जिन्दगी भोगिरहेका होलान्, तर शर्मिलाको अनुभूतिमा जुन तीव्रता छ, त्यसले उनलाई कथाकार बनाएको हो । यस्तो लाग्छ, कथा लेख्नु उनको विवशता र बाध्यता हो ।
च) कथाहरू पढ्दै जाँदा कुनै पनि पाठकलाई पट्यार लाग्दैन । एउटा खोलाको प्रवाह जस्तो हरेक कथामा stream of conscious अर्थात् चेतनप्रवाह छ, जो कथाको मुख्य शक्ति हो । यही शक्तिले कथालाई अन्य आख्यानात्मक तत्त्वबाट फरक राख्छ । त्यही फरक वा कथाबिन्दुलाई शर्मिलाका कथाहरूले टिपेका छन् ।
छ) नेपाली मध्यम र तल्लो परिवारका सामाजिक समस्या, तिनका घात-प्रतिघात, प्रेम र यौन, गरिबी र पीडा, बाँच्नुको सङ्घर्ष आदि नै उहाँका कथाका विषयहरू हुन् । यी दुइ वर्गले नै आजको नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दछ । एक किसिमले समकालीन कथा भनेकै यिनै वर्गका विकृति, विसङ्गति, नियति, निर्णय निश्चयहरू हुन् । तिनको सम्यक् प्रतिनिधित्व प्रायः सबै कथाहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरेका छन् ।
ज) शर्मिलाका कथाहरूको उद्देश्य सकारात्मक छन् कहीँकतै नकारात्मक, ध्वंसात्मक वा नचाहिँदो व्रि्रोहात्मक छैनन् । सामाजिक यथार्थ, संरचना र घटनाले बगाएर ल्याएका पात्र-पात्रा उहाँका कथाहरूभित्र अटाएका छन् । कुनै बनावटी, नक्कली वा कृत्रिम पात्र-पात्राहरू कुनै कथामा छैनन् ।
झ) आजको कथाले विधाभञ्जन गर्न खोजिरहेको छ, अर्थात् परम्परागत पर्खाललाई तोड्न खोजिरहेको छ । कथावस्तु, शैली वा प्रस्तुति, पात्र-पात्रा, चरित्रहरूमा मात्र नवीनता होइन कि अन्य विधाहरू जस्तो कि निबन्ध, कविता, गजल,वा अन्य विधाहरूलाई आफूभित्र आत्मसात् गर्दै कथा-विधा अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ । आजको इन्टरनेट युगमा कथाले खोजेको जुन नयाँ हाँक वा प्रस्तुति छ, त्यसलाई शर्मिलाका कथाहरूले पछ्याएका छन् अथवा त्यस ट्रेन्ड (गति) लाई बुझेका छन् ।
ञ) अन्त्यमा कथाका भाषा सरल, सरस र रोचक छन् । पात्र-पात्राहरू त्यही जीवन्त वा व्यावहारिक भाषामा कुराकानी गर्छन् जो प्रचलित छन् । शर्मिलाका सबै कथामा नेपालीपन अर्थात् हाम्रो खास मौलिकता छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।
ट) शर्मिलाका कथा, बालकथा र कविताहरू पढेको छु । तर यस क्रमलाई राख्नुपर्दा उहाँ पहिलो सशक्त बाल-साहित्यकार नै हुनुहुन्छ, त्यसपछि कथाकार र अनि मात्र कवि वा गजलकार । अहिलेसम्मको लेखन-ऊर्जा वा सृजना-क्षेत्र हेदा उहाँलाई बाल-साहित्यकार नै भन्नुपर्छ, अरू क्रमशः आउँछन् वा आउनेछन् । किनभने उहासँग थुप्रै वर्षरू बाँकी छन् ।
शर्मिला खड्काका कथाहरूमा भविष्यमा राम्रो कथाकार -बाल पनि) बन्ने धेरै सबल पक्षहरू छन्, अर्थात् उनी अहिले आसलाग्दो बिरुवा हुनुहुन्छ । उहाँले साधना गर्नुपर्ने, भोग्नु र लेख्नुपर्ने धेरै लामा वर्षरू बाँकी छन् । नेपाल राष्ट्रले, नेपाली समाजले उनबाट धेरै स्तरीय, राम्रा साहित्यिक फलफूलहरू पाउन सक्छन् । उहाँलाई प्रोत्साहन गरौँ, मलजल हालौँ, गोडमेल गरौँ भन्ने मात्र मेरो अनुरोध हो, यसलाई कसैले अन्यथा नलिऊँ । भोलिका सफल कथाकारको सूचीमा शर्मिला खड्का दाहालको नाम हाम्रा भावी-पुस्ताले पढ्न पाऊन्, यही मेरो हार्दिक शुभकामना छ ।
अन्त्यमा उनलाई अमेरिकी नेपाली साहित्यँ समाजले अनेसास सर्वोत्कृष्ट नारी हस्तक्षार 2005 र 2006 को स्व डिल्लीराम तिम्सिना स्मृति पुरस्कारदारा सम्मान गरेको छ । अथार्त उनी राष्टियवाट अन्तराष्टिय भएको छिन ।
उनमा देखिएको साहित्यिक उर्जाशीलता , लगन, प्रतिभा र अध्ययनको मूल्याकन गर्दा नेपाली साहित्यले आख्यान र बाल-साहित्यमा उल्लेखनीय योगदान पाउने निश्चित देख्छु । राष्ट समाजले उहालाई अझ बढी प्रेरणा, सहलियता र सुविधा दिनपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ ।
परशु प्रधान,विराटनगर २०६४ साउन
(कथासग्रह “समयको क्यानभासमा” को भूमिकावाट लिइएको हो )
नियतिले जन्माएको कुण्ठा
9:06 AM कथा
छोरीको आकस्मिक विमारीले मलाई अस्पताल पुयाउँछ । विमारी छोरी लिएर म आकस्मिक कक्षमा पुग्छु । आकस्मिक कक्षमा सबै डाक्टरलगायत अन्य कर्मचारी ब्यस्त देख्दछु । त्यहाँ कुर्सीमा गम्केर बसको डाक्टरलाई म विमारीको सबै लक्षण बताउँछु र आफूले घरमा नै गरेको प्राथमिक उपचारको जानकारी दिन्छु । सबै वृतान्त सुनेपछि उसले नजिकै बसेको अर्को डाक्टरलाई सम्बोधन गर्दै विमारी हेर्ने कुरा बताउँछ । उक्त ब्यक्तिको अनुहार मलाई चिरपरिचित लाग्दछ । मैले स्मरणको ढोका ढकढकाएँ अनि थाहा पाएँ ऊ मसँग पढ्ने प्रज्जवल रहेछ । उसले मलाई चिन्न सकेन । तर मैले उसलाई चिनेँ । नातावाद कृपावादले निलेको हाम्रो सामाजिक सस्कारलाई मपनि चाट्न पुग्दछु । मैले परिचयको ढोका उघारेँ । उसले मलाई नियालेर हेर्यो । मैले आफ्नो परिचय दिएँ । दश वर्षघिको सम्झना उसको मस्तिष्कमा ताजै रहेछ । हामीसँगै आइएस्सीमा पढथ्यौँ । उसले अन्य साथीभाइको बारेमा सोध्यो मैले पनि जाने जति बताएँ त्यसपछि उसले मलाई आत्मीयता देखायो । म पनि सोही चाहन्थेँ । छोरीलाई स्लाइन पानी दिनुपर्ने भयो दिइयो पनि ।
स्लाइनको पानीको थोपासँग म आफ्नो अतीत बगाउन पुग्दछु । मेरो जीवनले दश वर्षो साउने झरी बगाइसकेछ । प्रज्वल उही ब्यक्ति हो जसलाई म क्याम्पसमा मन पराउँदिनथेँ । ऊ आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्च गरेर मलाई रिझाउन खोज्दथ्यो । तर म उसको छायासम्म मन पराउँदिन थिएँ । ऊ साधारण परिवारको साधारण ब्यक्तित्व भएको थियो भने म उभन्दा निक्कै सम्पन्न परिवारको र रूपवती थिएँ । उसँग मेरो तुलना नै हुन सक्दैनथ्यो । उसले कुनै उपाय नलागेर अर्को ब्यक्ति मार्फ बिहेको प्रस्ताव पनि पठाएको थियो । जुन म लगायत मेरो परिवारकले ठाडै अस्वीकार गरेका थियौँ । यसबाट उसलाई नराम्रो मानसिक असर परेको हुनुपर्दछ । नत्र भने साधारण पढाइ भएको प्रज्वलले कसरी डाक्टरी पढ्न सक्थ्यो होला र - अहिले उसको व्यत्तित्व पनि निकै लोभलाग्दो देखिन्थ्यो । पहिलेको प्रज्वल र अहिलेको प्रज्वलमा आकाश जमिन फरक थियो । ऊ एउटा राम्री युवती लिएर अर्को कोठामा पस्छ । अनि ढोका लगाउँछ । ती दुइजना त्यहाँ किन पसे, मेरो ध्यान त्यतैतिर जान्छ । त्यो केटीसँग आएकी आइमाई मान्छे मसँग बोल्न खोज्दछे । ऊ सोधपुछ गर्न खोज्दछे । म पनि उसको बारेमा सोध्छु । उसले छोरीलाई जचाउन ल्याएकी रहिछे पिलो आएर । उनीहरू एउटै गाउँका रहेछन् । एकछिनपछि उसकी छोरी र प्रज्वल हाँस्दै कोठाबाहिर निस्कन्छन् । म उनीहरूलाई शङ्का र कपटपूर्ण हेर्राईले हेर्छु मलाई कताकता रिस उठ्छ । म आफ्नो स्थानमा बसेर हेरिरहन्छु । फेरि उही सहायक आएर कराउँछ । त्यो ब्यक्ति मसँग निकै नजिक हुन चाहन्छ । सायद प्रज्ज्वलले भनेर होला वा मेरो नारी सौर्न्दर्यपान गर्न हो, यी दुइटा कुरामा एउटा चाहिँ पक्कै हो भन्ने निष्कर्षा म पुग्दछु । तर जे भए पनि नौलो ठाउँमा कसैले आत्मीयता देखाएको हुनाले म खुसी नै हुन्छु । प्रज्वल स्वयम् मसँग चासो राख्दैन । किन होला - सायद विगतमा बिझेको काँडाले वर्तमानमा पनि झस्काउँदो होला उसलाई । म यसो बाहिर चियाउन पुग्छु । ऊ अर्को राम्री लेडी डाक्टरसँग हाँस्दै गफ गरिरहेको देख्छु । ऊ सायद प्रतिसोधको भावानाले मलाई जलाउन खोजिरहेछ, भन्ने म अनुमान गर्दछु । तर होइन उसँग काम परेर गफ गरेको पनि त हुनसक्छ नि, भनेर मभित्रको कुण्ठालाई दबाउँछु । मलाई अब उसको जीवनसँग के सरोकार, ऊ जोसग हाँसे पनि मलाई किन चासो परिरहेछ, थाहा छैन । म आफूभित्रको आवश्यकताभन्दा बाहिरको चिन्तनलाई मेटाइदिन्छु ।
म वर्तमानमा आएर छटपटिन्छु । मलाई प्रज्वलले विगतमा पाएको नियति भोग्न बाध्य गराएको छ । म न बाँच्न सक्छु, न त मर्न सक्छु । म कुण्ठित छु विखण्डित छु, कहिले नजोडिने गरी । व्यक्तिले गरेको निर्णय र सोचाइ कति गलत हुदोरहेछ भन्ने कुरा म आफैँले प्रमाणित गरेर देखाएको छु । म शून्यतामा मनोवाद गर्न पुग्दछु । सायद प्रज्वल मेरो वर्तमानबाट अनभिज्ञ छ । ऊ सोच्दो होला मैले राम्रो घरानामा बिहे गरेर खुसीसाथ बसेकी छु । जीवनमा पाउनु पर्ने खुसी सबै पाएको छु । तर उसलाई के थाहा म आ“सु पिएर बाँचेकी छु भन्ने । उसलाई म यो भन्न पनि चाहन्नँ किनभने उसले यो थाहा पायो भने मेरो स्थितिप्रति ऊ उपहास गर्नेछ अनि मलाई सहनुभूतिका अस्त्रहरू प्रयोग गरेर ऊ आफ्नो हृदयमा लागेको पीडामा मलहमपटी गर्नेछ । जुन म चाहन्नँ ।
केहीछिनपछि एउटी सिस्टर आउँछे । छोरीलाई अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्छ भनेर जान्छे । छोरीलाई वार्डमा लगिन्छ । म छोरीसँग हुन्छु । माइतमा फोन गरेर दाजुभाउजूलाई बोलाउँछु । घरमा फोन गर्नलाई कुनै औचित्य छैन । किनभने घर भन्नु मेरो चारपर्खालको गाह्रो मात्र छ । कान्छी छोरी माइतमा नै छ । घरमा को छ - उनीहरूका बुबा भनौँ मेरो लोग्ने, ऊ घरपरिवारको लागि निर्जिवसरह छ । उसको कुनै अवशेष बाँकी छ भने मात्र छोरीहरूको बाउ भन्ने एउटा पहिचान मात्र बाँकी छ । ओहो † यो पीडाले ठाउँ, बेठाउँ कतै पनि छोड्दैन । जुन बेला बढी दायित्व बोक्नु पर्ने ठाउँ पाउँछु पीडाले पोल्न थालिहाल्छ । यस्तो बेालमा बुबाको भूमिका प्रमुख रहन्छ बच्चाका लागि । तर...... त्यसैले त मुटु पोलिरहेछ । तर...... म पीडा पोख्न पनि सक्दिनँ। उकेल्न पनि सक्दिनँ । पीडाको आभाषसम्म दिन चाहन्नँ परिवेशलाई । त्यसैले त म बाँचिरहेको छु, एउटा शक्तिशाली नारी भएर । त्यहीँ शक्तिशाली नारी व्यक्तित्व दुर्गाको रूप लिएर ममाथि जाइलाग्छे ''किन सम्झन्छेस् उसलाई, तँलाई के दिएको छ उसले, पीडा, दुःख रोदन र एकाङ्की जीवन सिवाय, वास्तवमा उसले मलाई ठीक भनिरहेकी छे । किनभने ऊ अर्थात शेखरलाई म कति मन पराउँथे । ऊ मेरो हृदयको राजा थियो । उसको स्वर र सगीतप्रति मोहित भएर मैले मेरो माइतीको भावनालाई कुल्चाएर उसलाई अँगालेको थिए । ऊ मेरो सम्पूर्ण थियो, ऊ नै मेरो जिन्दगी थियो ऊ नै मेरो वर्तमान थियो, ऊ नै मेरो भविष्य थियो । ऊ विना एक छण पनि म कल्पना गर्न सक्दिनथेँ । उसको बोलीमा विश्वास गरेँ वाचालाई कबुल गरेँ। उसको सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई विश्वास गरे अनि ऊप्रति सकारात्मक पाइलाहरू चाले“ ।
सुखद भविष्यको कल्पना गर्दै पाइलाहरू अघि बढ्न थालेँ । म ठान्दथेँ ऊ मेरो मात्रै हो अरू कसैको होइन । ऊ मेरो सिवाय अरू कसैको हुनै सक्दैन । मेरो अपरिपक्व सोचाईमा तब ठेस पुग्यो जब ऊ रातभर पनि घर आउँदैनथ्यो । उसलाई म र मेरो भावानाप्रति कुनै सरोकार थिएन । ऊ रातभर स्टुडियो, सुटिङ्ग, र रेकडिङ्गमा नै ब्यस्त रहन्थ्यो । बिस्तारै उसको गायन क्षेत्र मौलाउँदै गएको थियो ऊ राष्ट्रियस्तरको गायक तथा कलाकार बन्यो उसका फेनहरू धेरै भए । शुभचिन्तकहरू धेरै भए । ऊ मप्रति मात्र हैन छोरीहरूप्रति पनि उदासिन रहन थाल्यो । कान्छीछोरी जन्मँदा उसले मलाई आफ्नो वास्तविक चरित्र देखाएको थियो । ऊ एकपल्ट पनि अस्पतालमा मलाइ भेट्न आएन । ऊ धेरै माथि पुगिसकेको थियो । उसको लागि म साधारण महिलामात्र थिए । कतिले छोरी जन्म्यो भनेर नआएको होला पनि भने । सबैले आ-आफ्ना अडकलका बिस्कुन फिजाएका थिए । मैले त्यस्तो नाजुक अवस्थामा पनि आफूलाई सम्हालेँ । अनि छोरीहरूलाई पनि सम्हालेँ । त्यसपछि शेखर र मेरो असमझदारीको दूरी बढ्दै गयो । वास्तवमा ऊ, यही चाहन्थ्यो किनभने मसँग उसले खोजेको ग्लैमर्स, प्रतिभा, र सम्पत्ति केही थिएन । माइतीले दिएका केही सम्पत्ति पनि उसका एलबमहरूमा खर्च भइसकेका थिए । त्यसैले उसले मबाट पाउने कुरा केही थिएन । बरु उसको सफलतामा बाधा पर्ने तत्वहरू धेरै थिए मसँग । त्यसैले ऊ मदेखि धेरै टाढा हुँदै गयो । म भने मेरो कोमल नारी हृदयलाई विद्रोही अर्न्तभावले कठोर बनाउँदै लगेँ । अनि आफूलाई जस्तासुकै परिस्थितिमा पनि बाँच्न सक्ने शक्ति पैदा गर्दोरहेछ । जिन्दगीलाई सम्झौता र सङ्रघर्षका पयार्यकारूपमा लिएर पाइलाहरू अघि बढाउँदै लगे ।
पुन ः प्रज्वल र अरू दुइ डाक्टर आएर मेरो एकाग्रता भङ्ग गर्न आइपुग्छन । छोरीलाई एपेन्डिक्सको अपे्रशन गर्नुपर्छ भनेर जान्छन् । म गहिरो चिन्तामा डुब्छु । भोलिपल्ट दिउँसो छोरीको अप्रेसन छ । म रातभर छटपटिन्छु । छोरीको पीडासँगै आफूपनि बग्छु । प्रज्वल किन हो त्यति आएन । रातभर स्लाइन पानी दिइयो । मनमा अनेकौ तर्कनाका ज्वारभाटाहरू उठ्तै, बस्तै गए । आफूले आफैलाई सान्त्वना दिए । तोकिएको समयमा अप्रेसन भयो । अप्रेसन सफल हुन्छ । अप्रेसन सकिएपछि र्सजन डाक्टरले मलाई बोलाउँछ । उसले भन्छ ''तपार्इँको छोरीको वास्तवमा एपेन्डिक्स फूलेको रहेनछ । हामीसँग भिडियो एक्सरेको मेसिन बिग्रेको हुनाले राम्रो डायग्नोसिस नगरी अप्रेसन गरेछौँ तर पनि केही भएको छैन । यो साधारण कुरो हो ।'' म आक्रोसित बन्न पुग्दछु अनि क्रोधलाई शब्द शब्दका वाणमा परिवर्तन गर्न पुग्दछु । ''तपार्इ“हरूको लागि यो साधारण कुरो हो तर मेरो लागि होइन । तपाईँहरूले के ठान्नुभएको छ - मेरो छोरीलाई खसी काटेझैँ काट्दा साधारण भन्नु हुन्छ वा एउटा गोली खाएर निको हुने विमारलाई चिरफार गर्नुहुन्छ । मैले यतिका समयसम्म कति मानसिक वेथा सहे हु“ला । तपाईँहरूले यो कल्पना पनि गर्न सक्नु हुन्न । त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नसक्नु हुन्छ - यत्रो नाम चलेको अस्पतालमा एउटा भिडियो एक्सरे मेसिन तयारी अवस्थामा राख्नु पर्दैन । विमारीको जिन्दगीसँग खेलवाड गर्नुहुन्छ -''
मेरो आवाजले अप्रेसनथियटरको बाहिरको कोठा थर्कन्छ । म आफूभित्रको कुण्ठा सबै पोख्दछु त्यो डाक्टरलाई । उसलाई झम्टन्छु । छुट्टयाउन प्रज्वल आइपुग्छ । मेरो आक्रोशित र व्रि्रोही हृदय पग्लेर आ“सुमा परिणत हुन पुग्दछ । म गल्छु, नियतिले भिज्छु, कुण्ठाले चुटिन्छ । प्रज्वल मूर्तिवत हुन पुग्दछ । यसमा उसको कुनै दोष थियो वा थिएन म भन्न सक्दिनँ । किनभने उसैले मेरो निकटता खोजेर मेरो छोरीको अप्रेसन गराएको पनि हुन सक्दछ । यसोगर्दा उसले मलाई उसको शान शौकत देखाएर मस“ग बदला लिन सक्थ्यो । म उसलाई शङ्कालु र दोषपूर्णहेर्राईले हेर्छु मलाई सबै पुरुषहरू देखि घृणा लागेर आउँछ । छोरीको अवस्था देख्दा मुटु फुटेर आउछ । सास थुनिएर आउँछ । मातृत्व वात्सल्यताले मुटु चिरिएर ज्वालामुखी निकाल्न खोज्दछ । म लामो सुस्केरा लिन पुग्छु । छोरीको नाजुक स्थितिले म छटपटिन्छु । त्यहाँ एक सेकेण्डपनि बस्न सक्दिन। त्यसपछि मेरा दाजुभाउजूलाई छोरीको हेरविचार जिम्मा लगाएर म हिड्छु कतै एकान्तमा जहाँ जाँदा पनि मेरो नियतिले भनिरहेको थियो - 'जसरी मैल प्रज्वलको प्रेमको एउटै गोली खाएको भएहुने ठाउँमा शेखरको प्रेमलाई राम्रा् डायग्नोसिस नगरी जीवनलाई नराम्ररी चिरफार गर्न पुगेँ त्यसरी नै यी डाक्टरहरूले मेरो छोरीले एउटा गोली खाँदा निको हुने विमारलाइ चिरफार गरेर मैले मेरो जिन्दगीमा भोग्नु परेको नियति भोग्न बाध्य गरायो । म जुन मानसिक पीडामा छटपटिरहेछु त्यहीँ पीडा भौतिकरूपले मेरी छोरीले भोग्न बाध्य भएकी छे । '
9:03 AM कथा
"ओहो † भिनाजु कहिले आउनुभयो नेपालबाट -"
"केहीदिन भयो , तिम्रो पार्सल थियो ल्याइदिऊ भनेको समय नभएर.. अनि सालीज्यूको के हालखबर छ - ह्वाट अबाउट यु - "
यस्तै गफ चन्छ प्रो. डा. शान्ताराम र मेरो । ऊ मेरो भिनाजुको साथी त्यसैले भिनाजु नै भन्ने गरेकी छु । कहिलेकाहीँ म जस्तो डायनामिक लेडी जीवनसाथी बनाउन पाइनँ भनेर तीतो ओकल्ने गर्छन् मसँग उनी, तर पनि आफ्नो पत्नीप्रति इमान्दार नै छन् । नत्रभने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताले निलेको अमेरिकी संस्कारमा रमाउन उनलाई कुनै गाह्रो पर्ने थिएन । यसो नहुनुमा मेरो दुइवटा अनुमानित कारणहरू छन् । पहिलो त उनी अति ब्यस्त हुनु हो, अर्को चाहिँ भेनाजुको साथी भएर पनि हुनसक्छ । अरू जे सुकै भएपनि मसँग ख्यालठट्टा गर्नमा चाहिँ पछि पर्दैनन् उनी ।
" ओहो † दिदीले कति मीठो लप्सीको अचार पठाइदिएकी रहिछिन् । "
"ल पार्सल बिस्तारै हेर्नू मलाई अलिक हतार छ , सालीज्यू , भिनाजुको खातिरदारी गर्दिर्नौ - "
दिदीले मेलमा भन्ने गर्थिन्, छोरीहरू ठ्याक्कै हामी जस्ता छन् । हामी सानामा जस्ता थियौँ त्यस्तै छन् रे । साँच्चै म र मेरो दिदीमा कति धेरै भिन्नता थियो ऊ जाडोमा जन्मेकी थिई , म गर्मीमा ,ऊ गुलियो मन पराउँथी म अमिलो । ऊ कम बोल्ने लज्जाल रु आज्ञाकारी थिई भने म धेरै बोल्ने चञ्चली र घमण्डी स्वभावको थिएँ । साँच्चै हामीलाई देख्ने , बुझ्ने जोकाहीले हामीलाई अमेरिका र अफ्रिका भनेर मुल्याङ्न गर्ने गर्दथे । वास्तवमा हामी थियौँ नै त्यस्तै । बाबा सरकारी अफिसमा अधिकृत हुनुहुन्थ्यो भने मम्मीले डेकेयर चिल्डेन सेन्टर चलाउनु भएको थियो । मेरी मम्मी पाश्चात्य जीवन शैलीबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो । तर्सथ हामीलाई पनि त्यस्तै वातावरण र परिवेशमा हुर्काउनु भयो । बालबालिकालाई स्वतन्त्ररूपमा हुर्काइएन भने उनीहरूको भावाना , प्रतिभा र सोचाई संकुचित र कुण्ठित हुन पुग्दछन् । भन्ने सोचाई राख्नु हुन्थ्यो उहाँ । हाम्रो समाजमा बालबालिकालाई दमित र शोषित वातावरणमा हुर्काइएको हुनाले नै उनीहरू शोषित मानसिकता बोकेका हुन्छन्, अनि उनीहरू आफूलाई परेको कुनै पनि अन्यायका विरुद्ध आवाज उठाउन नसकेका हुन् भनेर आम नेपालीको चरित्रलाई चित्रण गर्नु हुन्थ्यो । यसरी स्वतन्त्रपूर्ण वातावरणमा हुर्कदै जाँदा दिदीमा चाहिँ कुरानै असर परेन तर ममा भने मेरो जिद्दी र घमण्डी स्वभाव बढ्दै गयो । जे चाहना गरे पनि पाइने मानसिकताले गर्दा ममा हठीपन बढ्दै गयो । म केही व्रि्रोही र झगडालु हुँदै गएकी थिएँ । मेरो मम्मी कहिलेकाहीँ मेरो स्वभाव र प्रव़तिदेखेर दिक्क मान्नु हुन्थ्यो । उहाँले यसको दोषी आफैलाई ठहर्याउनु हुन्थ्यो । छोरीलाई चाहिने भन्दा बढी अधिकार र स्वतन्त्रता दिएको हुनाले त्यसको परिणाम आफैले नराम्ररी भोग्नु परेको दुखेसो ब्यक्त गर्नुहुन्थ्यो । वाल्यावस्थामा म आफूलाई सबैले माया गर्नुपर्छ र मेरो चाहना पूरा हुनर्ुपर्छ भन्ने कुराको ठाडो आदेश नै दिने गर्दथे । त्यससमय म केटासाथीहरूसँग बढी खेल्न रुचाउँथे । जब म वयस्क हुदै गए तब म केटासाथीहरूसँग टाढिनु पर्ने बाध्यताले पिरोलिन्थे । चौरमा खुलारूपमा केटाहरूसँग मैले खेल्न किन हुँदैन भनेर आवाज उठाउँथे । तर मेरो आवाज कोठाको चार भित्तामा मात्र सीमित रहन्थ्यो । छोरा- छोरी, नारी- पुरुषबीच यस्ता गरिने धेरै रुढीवादी संस्कारको म विरोधी हुँदै गए छोरीमान्छेलाई प्रवृत्तिले समेत ठगेको हुनाले म प्रवृत्तिलाई नै चुनौति दिन पछि पर्दिनथे । छोरीमान्छे महिनावारी हुँदा वार्नु पर्ने, लज्जालु स्वभावको हुनुपर्ने नारीसुलभ आचरण गर्नपर्ने कुराको म पूरै विरोधी थिएँ। म घरमा मम्मी द्वारा यस्ता कुराको निर्देशन भनौ सल्लाहहरू पाउँथे । तर ती सल्लाह मेरालागि कानमा तेल हाल्नु बराबर थियो । म आफ्नो स्वभाव र प्रवृत्तिमा दृढ थिएँ कतै नहल्लनेगरी । यसरी परम्परागत संस्कार मान्नु भनेको मेरो स्वाभिमानमा ठेस पुग्नु बराबर ठान्दथेँ म । बिस्तारै उच्चशिक्षाको लागि मैले काठमाडौ आउनुपर्यो । म र मेरी दिदीसँगै बसेर पढ्न थाल्यौँ ।
कलवेल बजेको झझल्को आउँछ । तर कोही छैन सायद रिर्चडको सम्झनाले झस्कायो मलाई । रिचर्ड, अमेरिकामा मेरो आफन्त, साथी जे भनेपनि उहीमात्र थियो । ऊ र म एउटै विश्वविद्यालयमा पिएचडी गर्दै गरेको हुनाले हाम्रो धनिष्टता बढेको थियो । यो विरानेा शहरमा उसले आत्मीयता देखायो अनि हृदय खेालेर सहयोग गर्यो । म पनि लचिलो र समर्पित भइदिए उसको हार्दिकता र आत्मीयतामा ।
ऊ भन्ने गथ्र्यो नेपालीहरू मलाई खूब मन पर्छन् उनीहरू इमान्दार मात्र हैन नैतिकवान र लगनशील पनि हुन्छन् । त्यसैले म तिमीलाई माया गर्छु , तिमीलाई म आफ्नो जिन्दगी सुम्पिदिन्छु । तिमी र म एक हुनुपर्छ । नेपालको द्वन्दमा पिल्सेको समाजबारे विद्यावारिधी गर्दै गरेको म र ऊ धेरै नजिक भएका थियौँ। अब नजिक हुनको लागि कुनै रेखा बाकी थिएनन् । हामी जीवनको परिभाषा खोज्थ्यौँ । ऊ भन्ने गथ्र्यो, 'तिमी त आम नेपाली भन्दा फरक रहेछौ , तिम्रो विचार , स्वभाव नेपाली संस्कारभन्दा धेरै फरक रहेछ । त्यसैले म तिमीबाट अत्यन्त प्रभावित भएको छु ।' साँच्चै म आम नेपाली भन्दा पृथक भएकै कारणले त अमेरिका जस्तो देशमा पिएचडी गर्न छात्रवृद्धि पाउन सकेँ । म आफूले आफैलाई स्पष्टीकरण दिन पुग्दथेँ । साँच्चै म पनि रिचर्डको व्यक्तित्व र विचारबाट अत्यन्त प्रभावित भइसकेकी थिएँ । मैले उसको धेरै कुरामा विस्वास गरेँ । केही कुरा बाहेक किनभने धेरै थोरै अमेरिकनमा रिचर्ड पनि पर्दथ्यो जसले नेपाल र नेपाली को तारिफ गरेको होस् । धेरै वर्षघि ऊ पिसकोर भोलियन्टरको रूपमा नेपाल आएको थियो । यसैले नेपालको राजनीति, सामजिक, आथिर्क स्थितिबारे उसलाई पूरै ज्ञान थियो । प्रत्येक छट्ुटीमा हामीसँगै हुनेगथ्र्यौ । हामीले मुटु साट्यौँ । तन साट्यौँ। दुखसुख बाड्यौँ । कुनै क्षणपनि म रिचर्डको सोचाइको परिवेशभन्दा बाहिर हुन्नथेँ । कतै रिचर्ड पनि सुदर्शन जस्तै हुने हैन - म झस्कन्थेँ । उसका अविश्वास गरेका कुरामा विबाह पर्दथ्यो । अमेरिकी समाजमा विवाह सम्बन्धलाई अत्यन्त महत्वका साथ लिइन्थ्यो । हाम्रो यात्राकहाँ सम्म पुग्ने हो कसरी टुङ्गिने हो भन्ने कुरामा म चिन्तित रहन्थेँ । तर वर्तमानसँग सम्झैता गरेर बाँच्नुपर्छ, रमाउनुपर्छ भन्ने रिचर्डको भनाइले मलाई केही सान्त्वाना दिने गर्दथ्यो ।
के साँच्चै, ऊ मलाई बुझ्न सक्छ, पढ्न सक्छ । कि ऊ मात्रै अमेरिका आउनको लागि एउटा सहाराको खोजीमा छ । जसको लागि म दह्रो बैशाखी बन्न सक्छु । ऊ पनि सुदर्शन , रिचर्ड हुन के बेर । तर अब त मेरा विचार , सोचाई कतै शरणार्थी हुँदै छन् । म आफ्नो सोचाई , विचारहरू हराएर कसैलाई पाउँदैछु त्यसैले त्यसो नहुन पनि सक्छ । म मम्मीको केटो असल छ भन्ने शब्दमा अडिन्छु , मलाई कहिले यसरी केटाको बारेमा भन्नु हुन्न थियो । म मम्मीलाई अलिकति विश्वास ग त्यही विश्वासले मलाई नेपाल पुर्याउछ , थुप्रै अनुहारहरूले सोधिरहेको जस्तो लाग्छ 'आखिर नेपाली केटाको फेला परिस् हैन । कहाँ गए तेरा स्वतन्त्र विचारहरू सुमी' , मलाई थाहा छैन , म जिन्दगीको के कस्तो निर्णय लिँदैछु । यस्तो निर्णय पहिलो हुन सक्छ , दोस्रो वा तेस्रो हुन सक्छ । म भ्रममा रुमलिन्छु । विगतहरूमा रुमलिन्छु अनि अनायास मेरा औलाहरू टाइप र्राईटरमा जान्छन् । केही क्षण ओके टाइप गर्छपफेरि र्सतर्क हुँदै 'आइ विल डिसाइड आफ्टर ए मन्थ' टाइप गर्छु फेरि ओ. के. टाइप गर्छु म मूतिवत हुन्छु । अनायास मेरा औलाहरू 'ओ.के. मम्मी... ओ.के. ड्याटस मस्ट बी ए राइट च्वाइस...' टाइप हुन्छन् र म आफूलाई र्सवाङ्ग बिर्सेरड्वाङ्गराङ्ग पल्टन्छु । मैले निर्णय लिएँ । म अनिर्णय बन्दी हुन चाहिनँ ।
8:59 AM कविता, पद्य
यी आँखाहरु आँसु नै आँसुले सिचित छन्
यो छाती पीडा नै पीडाले चिन्तित छ
दुखै दुःखले भरिएको यो संसारमा
खै कहाँ खुसी सजिएको छ -
यो जीवन अभावैअभावले ग्रसिद छ
यो पाइला ठेसैठेसले त्रसिद छ
डुब्न लागेको क्षितिजभित्र
खै कहाँ राप भेटिएको छ
यो मष्तिक बोझैबोझले दमित छ
यो शरीर व्यथैव्यथाले शिथिल छ
उमगहीन यो उजाड भाग्यमा
खै कहाँ सौभाग्य कोरिएको छ
यो मन तिरैतिरले भेदित छ
यो तन काडैकाँडाले रोपित छ
सधर्षशील यी हातहरुमा
खै कहाँ दूर्भाग्य मेटिएको छ
यी आवाजहरु आवाजहरुबाट कुण्ठित छन्
यी खुसीहरु अरुका लागि नै शहिद छन्
निष्काम गर्ने यी हातहरुका लागि
खै कहाँ सही मूल्याकन अंकित छन्
यो उसको कथा हो
8:51 AM कथा
"हेलो शर्मिलाजी के छ हालखबर -" एउटा साहित्यिक कार्यक्रममा मेरो ऊसँग भेट हुन्छ । म पनि औपचारिकता निभाउँछु । उसँगको मेरो चिनारी कलिलै थियो । ऊ केही आक्रोशित र चिन्तित देखिन्थ्यो । ऊ झरनाबाट झरेको पानीझैँ बग्न थाल्यो - "तपाईँका कथाहरू त भटाभट छापिन्छन् नि, कसरी छापिन्छन् - मलाई पनि उपाय बताउनोस् न् । तपाईँको 'समय'मा छापिएको कथा 'समयको क्यानभासमा' र गरिमामा छापिएको 'अनिर्णयको बन्दी' पढेँ । तर मलाईचाहिँ 'समयको क्यानभास'मा नै मन पर्यो किनभने आफूपनि एउटा सफल कथाकार भएर तपाईँले झैँ कुनै युवतीले मलाई त्यसरी नै मन पराउँछे कि भन्ने लागेको छ ....."ऊ अस्पष्ट हाँसो हाँस्यो । मैले उसको मनोवैज्ञानिक अध्ययन गरेँ ।
"तर खैर यो कुरा छाडौँ । हेर्नोस् न मैले एउटा कथा कति मुस्किलले लेखेको थिएँ । तर त्यो छापिन नै सकेन । लेख्नुको पीडा बेग्लै, फेरि नछापिदाको पीडा बेग्लै । अब त आफू लेख्न पनि छोडुजस्तै लागेको छ । त्यसैले म अति दुखी छु । शर्मिलाजी , तपाईँको कतै चिनजान भए प्रयास गरिदिनुहोस न् ।" यति भनेर ऊ रोकियो ।
ऊ आफू धेरै बोल्ने अरूको कम सुन्ने व्यक्तिमा पर्दथ्यो । त्यसैले ऊ कहिले आफ्नो कुरामा ब्रेक लगाउँला भन्ने प्रतीक्षामा थिएँ म ।
"त्यो कुन कथा होला हेरौँ न । यदि कथा उत्कृष्ठ र समसामायिक भएमा छापिने समस्या नै हुँदैन किन पीर मान्नु हुन्छ - फेरि सुरुसुरुमा त सबैलाई गाह्रै हुन्छ । मलाई पनि कति गाह्रो भएको थियो भन्ने कुराको तपाईँ कल्पना नै गर्न सक्नुहुन्न । अहिले मात्र केही सजिलो भएको हो । अहिले पनि कतिपय मेरा रचना प्रकाशित हुन सकेका छैनन् । लेखन पनि माझिनुपर्दो रहेछ ।" उसको विश्वास जित्न खोज्दै भन्छु । उसले फेरि एक्सिलेटर दबायो ।
"यो कथा मैले धेरैअगाडि लेखेको हुँ। त्यसबेला यो समसामायिक थियो । तर एउटा कथा एक ठाउँमा दिएपछि एकवर्षसम्म अर्को पत्रिकामा नदिनू भन्ने नियमले यो कथा त्यसै प्रकाशनको मारमा पर्यो । फेरि पछि दिँदा यसको कुनै दम छैन भनेर सम्पादकहरूले त्यसै हुत्याइदिए । हेर्नोस् न मेरो कथा मैले कति मिहिनेत गरेर लेखेको छु । तपाईँले पढेपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ... ।"
मैले नै उसको कुरामा ब्रेक लगाउँदै भनेँ - "मलाई पनि कथा पढ्न दिनोस् न, त्यसपछि म तपाईँको कुरा सुन्न तयार हुन्छु ।" त्यसपछि उसले आफ्नो सानो ब्यागबाट कथा निकालेर पढ्न दियो ।
ऊ फेरि सुरु भयो- " हेर्नोस् यो मेरो आफ्नै कथा हो । यो कथा पढेपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ ।
म कथा पढ्न थालेँ । कथा यसप्रकारको थियो ।
मेरो अन्तिम कामना यही छ †
यहाँहरूलाई थाहै छ, म नव सिलवालको "कारगिलको मोर्चा" मा बाँचेछु भने आफ्नै देश र्फकन्छु भनेको । साँच्चै कारगिलको युद्धमा म बाँचेँ । मृत्यु मबाट निराश भएर र्फकनुपर्यो, भनौँ मुखमा आएको मृत्यु फर्केर गयो । तत्पश्चात् म भाँडाको सिपाही भएर अस्तित्वविहीन र उद्देश्यविहीन भएर हैन आफ्ने देशको परिचय लिएर बाँच्छु भनेर भारतीय सैनिकबाट राजीनामा दिएर फर्केँ ।
देश र्फकदा मसँग केही रकम, राष्ट्रियताले पोलेको मुटु र साथी हर्केको माया छातीभरि थियो । यो सब बोकेर म आफ्नो गाउँ तनहुँको वसन्तपुरतिर लागेँ ।
बाटामा मेरा काका पर्नेको घर थियो । मृत्युले फ्याकेको अनुहार एकपल्ट काकालाई देखाएर मात्र गाउँ जाऊ भन्ने सोचले म काकाको घरमा पसेँ । काकाको घरमा पसेपछि पो थाहा पाएँ, काकाको घरमा ठूलो आपत्ति आइपरेको रहेछ भनेर । म ड्युटीमा रहेकाले देशमा भएको यत्रो ठूलो दुर्घटनाप्रति म अनभिज्ञ रहेछु । मेरा काकाको छोरालाई इराकमा आतङ्ककारीले वीभत्स हत्या गरेका रहेछन् । काकाले मलाई देख्नेबित्तिकै डाँको छोडेर रुन थाल्नुभयो । सायद मलाई देख्दा आफ्नो कलकलाउँदो मुनाजस्तो छोराको सम्झना आयो होला उहाँलाई । फेरि काकाको छोरा र म दाजुभाइमात्र नभई दौँतरी पनि थियौँ । त्यसैले मेरो उपस्थितिमा छोराको सम्झनाले पिरोलेको हुनसक्छ उहाँलाई । समयसँग सम्झौता गर्दै थामिएको पीडाको भेल एक्कासि पोखियो मेरा समीपमा । त्यस समयमा उहाँ मात्र हैन लाखौ नेपालीको मुटु दुखेको थियो रे नेपाली हुनुको पीडाले । राष्ट्रियताको बाढी उर्लेको थियो रे । अनि धेरै राष्ट्रिय सम्पत्ति बगायो रे त्यस बाढीले । राष्ट्रियताको भावनाले पोलेको मेरो मनले केही शीतलता प्राप्त गर्छ कि भनेर सोचको थिएँ, तर झन् तड्पियो मेरो मन । जेनतेन आफूलाई सम्हाले अनि काकालाई सहानुभूतिका शब्दले शीतलता प्रदान गरेँ । त्यसदिन काका र मैले एकआपसमा पीडा साटासाट गर्यौ । मैले देशको स्थितिको बारेमा धेरै कुरा थाहा पाएँ । काकाले मेरो गाउँ जाने कुरामा असहमति जनाउँदा-जनाउँदै पनि म भोलिपल्ट आफ्नो गाउँतिर लागेँ ।
गाउँ जाँदा बाटामा पहिलाको जस्तो चहलपहल केही थिएन । गाउँघर असाध्यै शून्य थिए । मान्छेविहीन, पशुपन्छीविहीन गाउँ निर्जीवजस्ता देखिन्थे । बाटैमा रात पर्यो । वास बस्नका लागि उपर्युक्त घरको खोजी गर्न थाले । जताततै सन्नाटा थियो । केही पर एउटा घरमा धूवाँ आएजस्तो देखेँ । त्यहाँ केही गाईबस्तु पनि देखेँ। त्यहीँ सजीवताको अभासले मलाई त्यसै घरतिर डोर्यायो ।
"घरमा को हुनुहुन्छ - वास पाइन्छ कि.... -" - मैले विनम्रता बिछ्याएँ।
घरभित्रबाट एकजना वृद्ध लौरो टेक्तै बाहिर निस्के अनि सशङ्कित र आर्श्चर्यमिश्रति भावले घोरिँदै मलाई हेरेर भने- "बाबुको नि - परदेशीलाई वास बस्न दिन पनि गाह्रो छ †"
मलाई आर्श्चर्यभावले घेर्यो, पाहुनालाई भगवान्सरह मान्ने हाम्रो सभ्यतामा एउटा बुजुगले यसो भनेको सुनेर ।
"किन र बा, पाहुना त देवतासरह हुँदैनन् र -" मैले वास नपाउने सम्भाव्यतालाई पन्छाउँदै प्रश्न गरे“ ।
मेरो प्रश्न नसकिँदै बूढामान्छे जोसिए- "हुँदैन बाबु, हुँदैन, अब पाहुना देवतासरह मान्ने दिन सकिए ।"
वृद्धको कुराले बास नपाइएला कि भन्ने मनमा सन्त्रास उत्पन्न भयो अनि मैले अझ नम्र हुँदै भने- "साँझको पाहुना हुँ बा, अन्त कहाँ जाऊँ बास बस्ने ठाउँ पनि देखिँदैन । आजको रात दिनुहोस् कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन,बरु धर्म नै हुनेछ ।"
मेरो कुराले बूढाको मुख अलिक उज्यालो भयो । ममा पनि आशाको मुना पलायो । बूढाले घरभित्र बोलाउँदै भने- "त्यसो भए आउनुहोस् बाबु, भित्र बस्नुहोस् भनेर अगेनीको छेउमा सुकुल बिछ्याइदिए ।
बूढा पनि आगो छेउमा बसे । आगोको उज्यालोमा वृद्धको मुहारमा अनौठा भावहरू देखिन्थे ।
कुराको लिस्नो थप्दै वृद्धले भन्न थाले- "बाबु धेरै समयपछि पहाड आउनुभएजस्तो छ ।....... यो पहाड पहिलाको जस्तो छैन बाबु,...... तपाईँले पढेको, भोगेको र देखेको जस्तो छैन । नत्रभए हेर्नोस् - गुरूप्रसाद मैनालीले हामीलाई गुमाने र्घर्ती र धनजीते भोटे बनाएर छिमेकमा जन्माए । उनले मर्दाको मलामी, जिउँदाको जन्ती भन्ने पाठ सिकाएका हुनाले हामी त्यस्तो काटामार झगडा गर्दा पनि मिलेर बस्यौँ । तर हाम्रा छोराछोरी छिमेकमा मिलेर बस्नु त कता हो कता आफूआफू दाजुभाइ काटामार गरेर मर्न लागे बाबु ।"
वृद्धको कुराले म रोमाञ्चित भएँ । गुमाने र्घर्ती र धनजीते भोटे यसरी मिलेर बसेको देखेर आनन्दित पनि भएँ । मलाई उक्त वृद्धको कुराले अझ बढी उत्साही र जिज्ञासु बनाउँदै लग्यो । मैले संवाद बढाउने चेष्टा गर्दै भनेँ-
"अनि बा तपार्इँ को नि -"
वृद्धले भने-"म धनजीते हुँ बाबु, गुमाने भित्र बिरामी भएर सुतिरा'छ । उसले पहिला मलाई बिमारी हुँदा निकै चाकर गरेको थियो त्यसैले आज म उसको स्याहार गरिरहेछु ।" असीबाट पनि निकै माथि लागेको वृद्धको शारीरिक क्षमता देख्ता म छक्क परेँ । "हुन पनि हो, पहाडको विशुद्ध हावापानी अनि विशुद्ध खानेकुरा खाएर हुर्केका मान्छे हुन् । हामीजस्ता हुन् र -"
मेरो उत्सुकता बढ्दै गयो । "अनि तपाईँका श्रीमती र छोराछोरी खोइ नि बा ।"
उनले भृकटी तन्काउँदै भने- "हाम्रा श्रीमतीहरू छोराछोरीका पीरले मरिसके । अनि हाम्रा छोराहरू त अघि नै भने“ नि बाबु । एकअर्काका शत्रुझैँ बनेका छन् । सानोतिनो कुरालाई बिर्सेर सबैजना एक भएर बस्नुपर्नेमा बाबु..............।"
बोल्दाबोल्दै धनजीते बाका शब्द रोकिए । मलाई धनजीते बाका कुराले मुटु छोयो । हुन पनि हो छिमेकमा गुमाने र धनजीते कसरी मिलेर बसेका थिए रे । गाउँमा एउटा नमूना थियो रे त्यस समयमा । एकआपसमा झैझगडा भए पनि परेको बेला ज्यान दिन पनि तयार हुन्थे रे । तर आज तिनै गुमाने र धनजीतेबाका छोराहरू मिलेर बस्नु परै जाओस् पानी-बाराबार भएका छन् । "जिउँदोका जन्ती मर्दाका मलामी" भनेर बस्ने बाबुका छोराहरू "मर्दाको जन्ती, जिउँदाको मलामी" भएका छन् । यसो कसरी भएछ त भनेर मैले धनजीते बालाई प्रश्न राखेँ -"धनजीते बा, कसरी तपाईँका छोराछोरी मिलेर बस्न सकेनन् त ......अनि यो गाउँ यति बिघ्न उजाड कसरी भयो -"
मेरो कुराले धनजीते बा गम्भीर भए अनि भन्न थाले -"हेर बाबु, कसरी हाम्रा छोराछोरी एकआपसमा मारामार गर्न थाले, हामीलाई केही थाहा छैन । हामीले त हाम्रा छोराछोरी पढ्न सहर पठाएका थियौ“ । छोराछोरी धेरै पढ्छन्, बाबुआमालाई सुखशान्ति दिन्छन् अनि गाउँ र देशको विकास गर्छन् भनेर सोचेका थियौँ । तर उनीहरू त एकआपसमा मारामार गोली हानाहान गर्न पो सिकेछन् बाबु........ कतै यो सब त्यही अधर्मी र्घमानन्द पाध्येको काम हो कि भन्छु म त बाबु । किनभने मुखमा रामराम बगलीमा छुरा हुनेको भर हुन्न रे बाबु, हाम्रा अल्लारे छोराछोरीहरूलाई उसैले बझाएको हो कि भन्छु बाबु, म त । तर के गर्नु हाम्रा कुरा खाँदैनन् छोराछोरीहरू, उनीहरू आफै पनि त पढेलेखेका विद्वान् छन् नि बाबु, हैन त, ल भन्नोस् त ।"
धनजीते बाको "होमा होँ मिलाएँ मैले । उनी फेरि जोस्सिँदै भने- "हामीले कति दुःख गरेर हुर्काएका छोराछोरी मर्दा क्रिया गर्छन् बूढेसकालमा सहारा हुन्छन् भन्ने सोचेका थियौँ । तर अहिले भकाभकी मरेको खबर आउँछ । कहिले गुमानेको छोरा मर्छ कहिले मेरो, बाबु ..। हामी जिउँदै मरेजस्ता हुन्छौँ यता पुत्रशोकले आँसु बगाउनबाहेक केही सक्तैनौँ भने उता विधवा बुहारी र नातिनतिनाको बिजोक हेरेर बस्नबाहेक केही गर्न सक्तैन बाबु हामी .........।" यति भनेर धनजीते बा घुँक्कघुँक्क गरेर रुन थाले । म पनि पग्लिएँ धनजीतेबासँगै । मुटु फुलेर आयो, मस्तिष्क शून्य भएर आयो । मैले धनजीतेबाका आँखामा आँसु रोक्न सकिनँ । रात निक्कै छिप्पिसकेको थियो । धनजीतेबालाई निक्कै समयसम्म सान्त्वना र आश्वासन दिएपछि उनी सामान्य भए ।
मेरो पेटमा भोकले मुसा कुदिरहेको हुनाले साथमा रहेको चाउचाउ पकाएर खाने विचार जाहेर गरेँ । धनजीतेबाले पनि "हुन्छ" भनेर सबै सरसामान ठीक पारिदिए । चाउचाउ खाएपछि हामी सुत्ने तरखर गर्न थाल्यौ“ । मलाई भने निन्द्रा पटक्कै लागेको थिएन ।
देशको माया, गाउ“को सम्झनाले पिरोलिएर आएको मान्छे म अब गाउँ के जानु, गाउँ त पहिलाको जस्तो कोही रहेनछ । यहाँ त साथीभाइ, नाताकुटुम्ब आफन्त सबै साइनो मरिसकेछ । अब के भनेर गाउँ जाऊँ । बरु सहरतिर लागेर देशका लागि केही गर्नुपर्यो, यस्तै विचारले द्रवीभूत हुँदै साथी हर्केको सम्झना त्यही बिसाएर काठमाडौँ जाने विचार गरेँ मैले ।
उज्यालो भएपछि धनजीतेबासँग बिदावारी भएर काठमाडौँतिर हान्निएँ म । जीविकोपार्जनका लागि केही त गर्नैपर्यो । भोकभोकै केही गर्न पनि त सकिँदैन नि, फेरि पुख्यौली सम्पत्ति पनि केही थिएन जीविकोपार्जनका लागि मैले धेरै सोच बनाएँ । तर जुनसुकै क्षेत्र पनि देशमा चलेको गृहयुद्धले तहसनहस भएको रहेछ । होटेल खोलौँ भने पर्यटन व्यवसाय चौपट्ट थियो । उद्योगधन्दा खोलौँ भने बन्द र आन्दोलनले आक्रान्त थियो । मैले कुनै बाटो पहिल्याउन सकिनँ । त्यसपछि मैले कला, साहित्य, सङ्गीततिर आफूलाई डोर्याएँ । त्यतातिर पनि मैले सबै ठाउँमा देश दुखेको देखे । राष्ट्रियताको भावले ओतप्रँेत भएको मेरो मस्तिष्कले राष्ट्रियता पोखिने बाटो खोज्यो । मैले सबैभन्दा बढी राष्ट्रियता भण्डारन हुने ठाउँ साहित्य नै देखेँ । त्यहाँ मैले मजस्ता धेरै पात्रहरू मजस्तै सजीव भएर बाँचेको देखेँ । त्यहाँ मैले धेरै दिदी बहिनीहरू परशु प्रधानका 'सीताहरू' र 'निर्मला', अनि महेश विक्रम शाहको 'सिपाहीको स्वास्नी' भएर बाँचेको देखे । धेरै दाजुभाइहरू नगेन्द्रराज न्यौपानेको 'लुरे 'र महेश विक्रम शाहको 'छापामारको छोरा' भएर बाँचेको देखे । त्यस्तै प्रदीप वाग्लेलाई 'अघोषित युद्ध'मा पिरोलिएको देखेँ । महेश विक्रम शाहलाई "गाउँमा गीत गुन्जँदैनन्" भन्दै भौतारिएको देखेँ ।
यसरी धेरै कथाकारको कथामा गीतकारको गीतमा, चित्रकारको चित्रमा, मन्दिरको शङ्खमा विद्यालयको घण्टीमा देश दुखेको देखेँ । देशका लागि केही गर्छु भनेर आएको म मेरो सुर्याइँ मसँग सीमित रह्यो । म राष्ट्रका लागि केही गर्न नसक्ने नामर्द भएँ । जताततै च्यातिएको मेरो राष्ट्रियताको ध्वजा कतै सिलाउने र टाल्ने ठाउँ नै मैले देखिनँ र भेटिनँ । त्यसैले म आफैँ भत्किएँ, टुक्रिए । यसरी टुक्रिएर, भत्किएर बाँच्नुभन्दा त देशको माया छातीमा राखेर भाँडाको सिपाही भएर बस्ता नै मलाई शान्ति थियो । अब त एउटै कुरामात्र अनुरोध गर्न सक्छु त्यो के भने देशमा यस्तो वीर पुरुषहरूको जन्महोस् जसले देशको अस्तित्व, राष्ट्रियता चम्काउन सकोस् अनि शान्ति फर्काउन सकोस् । धनजीते र गुमानेबाका शिक्षा र आदर्शलाई जीवन्त राख्न सकून । मेरो अन्तिम कामना यही छ ।
मैले कथा पढ्दापढ्दै धेरैचोटि रोकिएर उसको मुख हेरेको थिएँ । ऊ विदेशबाट फर्किएको भन्ने चाहिँ थाहा थियो । उसको स्वभावले नै ऊ सिपाही हो भन्ने पनि देखिन्थ्यो । तर ऊ त नव सिलवालको कारगिलको मोर्चाको पात्र भन्नेचाहिँ मलाई थाहा थिएन । म कथा पढिसकेर पाना बन्द गर्दानगर्दा उसले फेरि आफ्नो रफ्तार शुरु गयो । म उसकै कथाको विषयमा घोरिइरहेको थिएँ। यो कसरी सम्भव छ भनेर । एउटा कथाको पात्र पनि जीवित भएर बा“च्न सक्छ । उसले शुरु गयो - "हेर्नोस् न शर्मिलाजी, यसो कथालेखन गरेर देशको सेवा गरौ भनेको यो आफ्नै कथा लेख्दा त छापिएन भने अरू त के छापियोस् । त्यसैले मत लेख्ने काम छोडूझैँ लागेको छ ।"
"होइन, होइन, तपाईँको यो कथा धेरै राम्र्रो छ । तर अहिले देशमा शान्ति आइसकेको छ । त्यही भएर होला तपाईँको यो कथा जनयुद्घताकाको रहेछ ।
"होइन,यो कथा त मैले जनयुद्घताका लेखेर नै दिएको थिएँ । तर छापिन्छ भनेर कुदार्कुर्दा देशमा जनयुद्घ नै समाप्त भयो । त्यसपछि त कसैले छाप्न नै मानेन । तपाईँ पत्याउनुहुन्छ शर्मिलाजी - यो कथा छाप्नका लागि मैले कति दुख गरेँ । कोही भन्छन् यो गुमाने र धनजीते को हो - कोही भन्छन् तपार्इँ को हो - तपाईँको परिचय के हो - म त आजीत भइसकेँ । मेरो परिचय यही कथाले दिएको काफी छैन र - अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीको विश्व कहाँ पुगिसक्यो । यहाँ भने लेखकले अनेकौ परिचय दिनुपर्ने अनि पात्रले म पात्र भएर बाँचेको भन्न नपाइने । यो कहाँको न्याय हो -" म मनोवाद गर्दछु किनभने उसले मलाई बोल्ने मौका दिने छैन भन्ने मलाई थाहा छ । वास्तवमा हो पनि हामी नेपाली नयाँ कुरालाई सजिलै पचाउन सक्दैनौँ । नयाँ कुरा विश्लेषण गर्न सक्दैनौँ । कुनै पनि राम्रा नराम्रा कुरा अरूले भनिदिनुपर्छ । हामी नयाँ सोच र विचारलाई सजिलै पचाउन सक्दैनौँ । अझ झन नारीले गरेका नयाँ कुरा त कहिल्यै मान्य र पच्य हुँदैन यो समाजलाईं । म पनि उसका यी कुरामा सहमत थिएँ । तर उसको कथा छापिने विषयमा सहमत थिइनँ किनभने देशमा शान्ति आइसकेको छ भन्ने मेरो सोच थियो । यो अवस्थामा उसको कथा असान्दर्भिक हुन सक्थ्यो । मैले उसलाई सुझाव दिँदै भने- "तपाईँको यो कथा अति उत्कृष्ट छ । पाठकले रुचाउन सक्छन् । बरु यसलाई यसो परिमार्जन गर्नुभए राम्रो हुन्थ्यो ।"
ऊ जङिगदै भन्न थाल्यो- "शर्मिलाजी अझै देशमा स्थायी शान्ति आएको छैन । देशमा साम्प्रदायिक द्वन्द्व भट्किएको छ । तर्राई दुखिरहेको छ । अब मेरो भेट धनजीते र गुमानेसँग नभएर कुनै बुधराम, सनिरामसँग अवश्य हुनेछ अनि उनीहरूले मलाई यिनै कुरा गर्नेछ । मात्र तपाईं समय पर्खनोस् । मेरो अन्तिम कामना पूरा भएको नै छैन । बरु तपाईँ एउटा काम गर्नोस् तपाईँ नेट चलाउनु हुन्छ । कतै पत्रिकामा मेल गरेर पठाइदिनोस न् । तपाईँले पठाउँदा छापिन्छ कि - बरु कथाकारको नामचाहिँ आफ्नै राख्नोस् ।"
मैले निकैबेर साचे“ । अरूको कथा त्यो पनि कथाकार नव सिलवालजीको पात्रको कथा आफ्नो नाममा छाप्दा कतै अप्ठ्यारो पर्ला कि भनेर । तर यो कथा समाजले पढ्नै पर्छ भनेर मैले सोचेँ , कथाकार जो भए पनि के भो र अहिले अरूको गीतलाई रिमिक्स बनाउँदै गाउँदा त भइरहेको छ भने यो त झन् सिर्जनाको कुरा भयो । बौद्घकिताको कुरा भयो । यसमा नयाँ प्रयोग र धार पनि छ । त्यसैले मैलै उसको कथा आफ्नै छाप्ने निर्णय गरेँ र पत्रिकामा मेल गरेर पठाएँ ।